News Collection: औंलाले थाहा दिन्छ लिंगको साइज !
औंलाले थाहा दिन्छ लिंगको साइज !
कामबिद्यामा पुरुष यौनाङको साइज महिलाका लागि सवैभन्दा चासोको बिषय हो । अधिकांश महिला पुरुषको ठूलो लिंगबाट चरम यौत सन्तुष्टि हुने ठान्छन् । त्यसैले महिलाले पुरुषको आर्कषक जिउडालसँगै उनको यौनाङको साइजबारे पनि यथेष्ट रुची राख्छन भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै हो ।
हालै सावैजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिबेदनले महिलाका लागि खुसीको संचार गराएको छ भने पुरुषका लागि चिन्ताको बिषय । दक्षिण कोरियामा गरिएको यो अध्ययन अनुसार पुरुषको हातको औंलाले धेरै कुराको निर्धारण गरेको हुन्छ । एसियन जर्नल अफ एन्ड्रोलोजीमा प्रकाशित सो रिपोर्टअनुसार साइँली औंला-औठी लगाउने औंला)को तुलनामा चोर औंला सानो भएका पुरुषहरुको लिंगको साइज ठूलो हुन्छ । यस्तै कुनै पुरुषको साइली औंला चोर औंलाको तुलनामा लामो छ भने उसको लिंगको लम्बाई पनि लामो हुन्छ ।
यसअघि भएका अध्ययनहरुमा समेत पुरुषको औंलाको लम्बाई र लिंगको लम्बाईवीच अन्तरसम्बन्ध रहेको निष्र्कष निकालिएका थिए । ती अध्ययनहरुले जन्मअघि नै टेष्टास्टेरोन हर्मोनले औंलाको लम्बाईसँगै लिंगको लम्बाई पनि निर्धारण गर्छ । ती अध्ययनका अनुसार पुरुषको लिंगको लम्बाईको अन्तरसम्बन्ध उसको दाहिने हातको दोस्रो र चौथो औंलावीचको लम्बाई अन्तरसँग जोडिएको हुन्छ । अध्ययनअनुसार यी दुई औंलावीचको लम्बाई अनुपात जति कम हुन्छ सो पुरुषको लिंगको लम्बाई त्यति नै बढी हुन्छ ।
यो अध्ययनपछि पुरुष प्रेमीहरु साबधान हुनुपर्ने भएको छ । प्रमालामा गरिरहँदा तपाईका केटीसाथीले हातका औंलाको लम्बाई हेर्दे लिंगको लम्बाई थाहा पाउनसक्छन् ।